जो निःसंकोच कोभिड–१९ ले मृत्यु भएकी महिलाको मलामी गए- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अरु डराएको बेला उनीहरुले कोरोनाले मृत्यु भएको शव बोक्न तयार भएका हुन्
जेष्ठ ४, २०७७ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — धुलिखेल अस्पतालमा कोरोनाको कारणले सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी २९ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको खबर शनिबार दिउँसोबाट चैत मासको डढेलो जस्तै फैलिसकेको थियो । सरकारले कोरोनाकै कारण उनको मृत्यु भएको घोषणा नगरेपनि स्थानीय प्रशासनले अस्पतालको रिपोर्टलाई आधार मानेर शव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल सुरु गरिसकेको थियो । दुई पटक परीक्षण गर्दा पनि कोरोना देखिएपछि अस्पताल र स्थानीय तहले एक खाले तयारी गरिरहेका थिए ।
तैपनि थप पुष्टि गर्न टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको रिपोर्ट नआएसम्म सबैमा अन्योल नै थियो । साँझतिर घटना बारे बुझन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा. गुणराज लोहनीसहितको टोली धुलिखेल नै पुग्यो । मृतकको शव छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख भएकोले टोलीको सुझावको आधारमा ती महिलाको शव अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने भयो ।
शवको पशुपतिस्थित विद्युतीय शव दाहगृहमा अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि प्रशासनले काभ्रेको एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई आग्रह गर्‍यो । तर, कसैले मानेन् । अब भने काभ्रे प्रशासनलाई आपत पर्‍यो ।
काभ्रेको सुरक्षा निकायले भक्तपुरसँग सहयोग माग्यो । भक्तपुरमा भने महानगरीय प्रहरी परिसर र विरदल गणले निजी गाडीलाई कोभिड एम्बुलेन्स बनाएको थियो । भक्तपुर सिद्धपाखरीका ३१ वर्षीय अरुण सैंजु र जेलाका ३० वर्षीय राजेश गैंजुलाई शव व्यवस्थापन गर्ने तालिम दिएर राखिएको थियो । उनीहरु भक्तपुर अस्पतालको चौरमा टेन्ट हालेर लकडाउन सुरु भएदेखि नै बसिरहेका थिए ।
उनीहरु भक्तपुर अस्पतालमा आउने बिरामीको ज्वरो नाप्ने र थप उपचारको लागि चिकित्सकसम्म पठाउँथे । कोभिड शंका लागेका बिरामीलाई त्यही एम्बुलेन्स राखेर ल्याउँथे । साँझ परेपछि अस्तपाल नजिकैको टेन्टमा आराम गर्थे ।
शनिबार भने उनीहरु नेपाली सेनाको विरदल गणका कर्णेल शिव पौडेललाई भेट्न ब्यारेकमै पुगेका थिए । भक्तपुर प्रहरी प्रमुख सविन प्रधान र कर्णेल पौडेल फोनै व्यस्त थिए ।
‘सायद काभ्रेमै कुरा भएको हुनुपर्छ । काभ्रेबाट शव लान गाडी नपाएको सुनेपछि हामी जान्छौं भनेर प्रस्ताव गरें,’ अरुणले भने । यो आपत टार्न नेपाल स्काउटको रोबर लिडर राजेश र स्काउट मास्टर अरुण तयार भए । यो सूचना काभ्रेमा दिइयो । उनीहरुको प्रस्तावले काभ्रेका सुरक्षा प्रमुखलाई पनि राहत मिल्यो ।
‘स्काउटमा लागेर सिकेको तालिमकै आधारमा हामीले विगतमा पनि यस्तो काम धेरै गरेका थियौं,’ अरुणले भने, ‘यसपालीको आँट पनि स्काउटले नै दिएको हो ।’
सेनाले उनीहरुलाई कोरोनाबाट मृत्यु भएको शव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तालिम पनि दिएको थियो । शनिबार साँझ साढे साते बजेतिर उनीहरु भक्तपुरबाट धुलिखेल अस्पताल गए । जहाँ कोरोनाका कारण बिहीबार राति १० बजे मृत्यु भएकी महिलाको शव थियो । भक्तपुरबाटै पीपीई सेट लगाएर गएका थिए उनीहरु ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एसपी सबिन प्रधान र सेनाका कर्णेल शिव पौडेलले उनीहरुको गाडीलाई स्कर्टिङ गरिरहेको थियो । धुलिखेल पुगेपछि अरुण र राजेश शव राखिएको ठाउँ तिर लागे । सुरक्षा निकाय प्रमुखहरु भने अस्पताल बाहिरै बसिरहे ।
‘अस्पतालले प्लास्टिकमा बेरेर राखेको शव स्ट्रेचर माथि राखेको रहेछ । तर, शवबाट बगेको रगत भने भुइँमा चुहिएको थियो,’ अरुणले भने, ‘हामीले दोब्बर र्‍यापिङ गरेर शवलाई व्यागमा हाल्यौं । चकलेट चेपिङ ट्यापिङ गरेर भुइँमा चुहिएको रगत पनि सफा गर्‍यौं ।’
उनीहरुले शव गाडीमा राखेर बाहिर आउँदा भक्तपुरबाट गएका सेना र प्रहरी बाहेक काभ्रेको प्रहरी निरिक्षकको टोली पनि स्कर्टिङका लागि तयारी अवस्थामा थिए । अस्पतालकै एउटा गाडीमा मृतक महिलाका श्रीमान बसेका थिए । भक्तपुरका प्रहरी र सेना प्रमुख, काभ्रेको प्रहरीको गाडीले स्कर्टिङ गरेर शव पशुपति लगियो ।
‘अरु सामान्य अवस्था जस्तो अन्तिम संस्कारका कुनै विधि प्रक्रिया भएन,’ अरुणले भने, ‘मृतकका श्रीमान र सेना प्रहरी एक सय मिटर टाढा बसेर हिरिरहनुभयो । हामीले नै लगेर शवदाह गृहमा छिरायौं । स्वीच अन गर्न मात्रै त्यहाँका कर्मचारी खटिए ।’
‘गाडीलाई डिसइन्फेक्टेड गर्‍यौं,’ अरुणले भने, ‘त्यसपछि हामी सैनिक एरिया भित्रै आइसोलेसनमा छौं ।’
विरदल गणबाट तीन सय मिटर पर जंगलमा आइसोलेशन ठाउँ बनाइएको छ । उनीहरुको खानाको व्यववस्था पनि सेनाले गरिरहेको छ । ‘हाम्रो स्वाब निकालेर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएपछि मात्रै फेरी भक्तपुर अस्पतालको फिबर क्लिनिकमा फर्कन्छौं,’ अरुणले भने ।
बिरामी भन्दा शव बोक्दा सुरक्षित
राजेश भक्तपुरकै आदर्श आजादमा पनि पढाउँछन् । अरुण पनि भक्तपुरकै एभरेष्ट स्कूलमा अनुशासन इन्चार्ज पनि हुन् । उनीहरुसहित आठजना मिलेर ‘रेसक्यू एण्ड अवेरनेस–१६’ नामक संस्था नै खोलेर काम गरिरहेका छन् ।
लकडाउनको अवधिमा भक्तपुर अस्पतालमा आउने बिरामीको ज्वरो नाप्ने अरु व्यवस्थापनमा चार जना खटिएका छन् । उनीहरु आइसोलेसनमा बसेपछि अस्पतालमा नुज किजु र पुनम कर्माचार्यले ज्वरो क्लिनिक सम्हालेका छन् ।
भक्तपुरको बिरदल गणबाट शव व्यवस्थापनको तालिम लिएका थिए भने रेन्जर महाविर गण छाउनीबाट डेडबडी हयाण्डलिङ र डेमोस्ट्रेसनको तालिम लिएका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट पीपीई लगाउने तालिम पाएका छन् उनीहरुले ।
आइसोलनमा रहेका अरुण र राजेशको शनिबार बिरामी तथा शव व्यवस्थापनको अनुभव नयाँ भने होइन । उनीहरुले लकडाउनको अवधिमा शंकास्पद बिरामी बोकेर पनि हिँडेका छन् । यस्तै मृत्यु भएकाहरुलाई घाटसम्म पनि लगिदिएका छन् ।
‘आरडीटी पोजेटिभ देखिएका, कोरोनाका शंका लागेका व्यक्तिको पनि यसअघि उद्धार गरिसकेको थिएँ,’ अरुणले भने, ‘बिरामी र कोरोना आशंका गरेको व्यक्ति बोक्नुभन्दा शव बोक्नु सजिलो हुन्छ । किनभने शव त राखेपछि एकै ठाउँमा रहन्छ । आफ्नो हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बिरामीहरु बोक्दा भने केही गरिहाल्ने हो कि भन्ने तनाव भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा सतर्कता हामीले अपनाएकै हुन्छौं । त्यसैले धेरै डर त लाग्दैन । मान्छे हो अब त पचाइ सकें ।’
निजी गाडीलाई कोभिड एम्बुलेन्स
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष केपी ताम्राकारले प्रयोग गरिरहेको गाडीलाई अरुणले एम्बुलेन्स बनाउन मागेर चलाएका हुन् ।
‘अरुण भाईले यस्तो बेला अरु एम्बुलेन्सले कोभिड लागेको बिरामी र मृत्यु भएको व्यक्तिको उद्धार गर्न गाडी भएन भनेपछि मैले दिएको हो,’ ताम्राकारले भने, ‘गाडी त मैले दिएँ, तेल भने उसले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।’
ताम्राकारबाट प्राप्त गाडीलाई विरदल गणका कर्णेल शिव पौडेल र अरुणले मोडिफाई गरेर कोभिड एम्बुलेन्स बनाएका हुन् । यो पाकिस्तानी दुतावासले लिलामी गर्दा ताम्राकारका साथीले किनेको टोयटा सर्फ जीप हो ।
घरमा वृद्ध आमालाई एक्लै छाडेर उद्धार
भक्तपुर दुधपाटी सिद्धपोखरीमा अरुणको घरमा ६२ वर्षीया आमा मात्रै छिन् । लकडाउन भएदेखि नै उनी घर गएको छैनन् । ‘आमासँग फोनमा कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने । राजेश पनि सुरुकै दिनदेखि अरुणसँगै छन् । भक्तपुर जेलमा भूकम्पले घर भत्किएपछि उनको बुबा, आमा, दाई, भाउजु र तीन भतिजि लिवालीमा छाप्रो मै छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ १३:२१
७१ वर्षीय भाइरोलोजिस्टको अनुभव : इबोला र एचआईभीसँग लडेँ, तर कोरोनासँग‍...
'जबसम्म खोपको विकास हुँदैन तबसम्म हामी सामान्य रुपमा बाँच्न सक्दैनौं । यो महामारी अन्त्यको रणनीति भनेको विश्वभर खोपको उपलब्धता नै हो । यो भनेको बिलियन डोजहरु उत्पादन गर्नु हो, जुन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ ।'
जेष्ठ ४, २०७७ डिर्क ड्रलान्स
पिटर पिअट भाइरोलोजिस्ट हुन् । उनी लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका निर्देशक हुन् । उनलाई मार्चको मध्यतिर कोभिड–१९ संक्रमण देखियो । उनले एक साताजति अस्पतालमा बिताए । उनी हाल लन्डनस्थित आफ्नो घरमा आराम गरिरहेका छन् ।
बेल्जियममा हुर्किएका उनी सन् १९७६ मा इबोला भाइरस पत्ता लगाउनेमध्ये एक हुन् । उनले आफ्नो जिन्दगीको धेरै समय संक्रामक रोगसँग लडेर बिताए । सन् १९९५ देखि २००८ सम्म उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) अनन्तर्गत एचआईभी एड्स कार्यक्रमको नेतृत्व लिएका थिए । हाल उनी युरोपियन प्रेजिडेन्ट उरसुला भोन डेर लेयनका कोरोना भाइरस सल्लाहकार छन् । पोइट भन्छन्, 'कोरोना भाइरस मेरा लागि जीवन परिवर्तन गर्ने अनुभव हो ।'
मे २ मा उनीसँग साइन्स म्यागजिनका लागि लिइएको अन्तर्वार्ताको सारांश :
१९ मार्चका दिन मलाई एक्कासि उच्च ज्वरो आयो । अत्यधिक टाउको र कपाल दुख्यो । यो अचम्मलाग्दो पीडा थियो । खोकी नलागे पनि महसुसचाहिँ हुन्थ्यो । मैले घरमै बसेर टेलिवर्किङबाट काम गरिरहेँ , किनकि म 'वर्काहोलिक' हुँ । पछिल्लो वर्षदेखि हामीले यसरी टेलीबाटै काम गर्ने गरेका छौं ताकि धेरै यात्रा गर्न नपरोस् । त्यो लगानी अहिले कोरोना भाइरसको बेला काम लागिरहेको छ ।
शंका त लागेको थियो, परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ नै देखियो । त्यसपछि म घरमा गेस्ट रुमको सेल्फ आइसोलेसनमा बसेँ । तर ज्वरो कम भएन । म अहिलेसम्म सिकिस्त बिरामी परेको छैन । पछिल्लो १० वर्षमा एक दिन पनि बिरामी बिदा लिएको छैन । म स्वस्थ्य जीवन बाँच्छु र नियमित हिँड्ने गर्छु । मेरा लागि एउटा मात्र जोखिमको कारण भनेको मेरो उमेर थियो । म ७१ वर्षको भएँ । सकारात्मक विचार राख्ने भएकाले यो रोगविरुद्ध लड्न सक्छु भन्ने आँट आयो । थकान र ज्वरो नघटेपछि अप्रिल १ मा डाक्टर साथीले अस्पताल जान सुझाव दिए । जँचाउँदा अक्सिजनको अभाव देखियो । मलाई भने श्वासप्रश्वासमा समस्या महसुस भएको थिएन । फोक्सोको परीक्षण गर्दा कडा खालको निमोनिया 'ब्याकटेरियल निमोनिया' देखियो । त्यही सामान्यतया कोरोनाको लक्षण हो ।
मलाई एकनासले थकावट महसुस भइराख्थ्यो तर पनि जहिल्यै ऊर्जाले भरिएको हुन्थेँ । म त्यो महसुस कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ । यसैबीच मलाई कोरोना नेगेटिभ देखियो तर पनि अस्पताल भर्ना हुनुपर्‍यो । भाइरस हराइसक्छ तर पनि त्यसको असर हप्तौंसम्म रहिरहन्छ ।
मलाई भेन्टिलेटरमा तुरुन्त राखिनेछ भनेर एकदमै चिन्तित थिएँ । मैले कतै पढेको थिएँ, मेरो जस्तो अवस्थाको व्यक्तिमा मृत्युको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले केही डराएको थिएँ तर भाग्यवश चिकित्सकहरुले मलाई अक्सिजन मास्क लगाइदिए । त्यसले काम गर्‍यो । म आइसोलेसन रुममा नै रहेँ, इन्टेन्सिभ केयर डिपार्टमेन्टमा ।
जब तपाईं थकित महसुस गर्नुहुन्छ, आफ्नो भाग्यलाई पछि छोडिदिनुहुन्छ । पूर्ण रुपमा नर्सिङ स्टाफसामु आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ । हरेक दिन तपाईंको उही रुटिन हुन्छ- सिरिन्ज लगाउनु र यसले काम गरोस् भनेर आशा गर्नु । प्राय: सक्रिय रहने कोसिस गर्थें तर म बिरामी न थिएँ ।
मैले एक बेघर मानिस, कोलम्बियन क्लिनर र एक बंगलादेशका व्यक्तिसँग रुम सेयर गरेको थिएँ । उनीहरु सबै डायबेटिजका बिरामी थिए ।
ती दिनरात एकदम पट्यारलाग्दा थिए । एक्लो महसुस हुन्थ्यो । कसैसित बोल्ने ऊर्जा हुँदैनथ्यो । केही साता कानेखुसी गरेर मात्र बोल्न सक्थेँ । अझै पनि साँझ मेरो बोल्ने शक्ति कम हुन्छ । मलाई एउटा प्रश्नले भने सधैं सताउँथ्यो- म यो संकटबाट बाहिर निस्केँ भने कस्तो हूँला ?
विभिन्न भाइरससँग ४० वर्षभन्दा बढी लडिरहँदा म संक्रमणको विज्ञ नै भइसकेको छु । म खुसी पनि छु किनकि मलाई इबोला भएन । ब्रिटिस अस्पतालमा कोभिडको उपचार हुँदा पढेको थिएँ, ३० प्रतिशतको मृत्यु हुने सम्भावना भनेर । यो मृत्युदर सन् २०१४ मा वेस्ट अफ्रिकामा देखिएको इबोलाको जस्तै थियो । यसले गर्दा झन् डर हुने रहेछ, इमोसनले जित्ने रहेछ । मैले आफ्नो जिन्दगीभर भाइरसविरुद्ध लडेँ तर अन्त्यमा उनीहरुले मसँग बदला लिए । एक साता त जीवन-मरणको दोसाँधमा बाँचेजस्तो महसुस गरेँ ।
अस्पतालको बसाइपछि म डिस्चार्ज भएँ । घर जाँदा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गरेँ । किनकि मलाई सहर हेर्नु थियो, खाली सडक हेर्नु थियो, बन्द गरिएको पब र ताजा हावा लिनु थियो । तर सडकमा कोही थिएनन्, कस्तो फरक खालको अनुभव ! म राम्ररी हिँड्न पनि सकिरहेको थिइनँ, धेरै दिन हलचल नभएर होला मासंपेशी दुखिरहेको थियो ।
घर आएर धेरै बेरसम्म रोएँ । म केही समय त सुतको सुतै भएँ । दिमागमा जोखिम अझै पनि हुन्छ होला भन्ने भान पर्दो रहेछ । म अहिले नेल्सन मण्डेलालाई अझै प्रशंसा गर्न थालेको छु । उनी २७ वर्ष जेल बसे तर निस्किँदा झन् मजबुत बनेर निस्के ।
म आशा गर्छु, यो संकटले धेरै ठाउँका राजनीतिक संकटलाई समाधान गर्नेछ । यो एउटा भ्रममात्रै पनि हुन सक्छ, तर हामीले पोलियो खोप अभियानका क्रममा कैयौं युद्ध रोकिएको देखेका छौं ।
मलाई जहिल्यै पनि भाइरसप्रति सम्मान छ, जुन अझै हराएको छैन । मैले जिन्दगीको धेरै समय एड्स भाइरससँग लडेँ । हामी जहिल्यै पनि यी सबलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौं । मेरो शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेसँगै भाइरसलाई फरक तरिकाले हेर्न थालेको छु । मलाई थाहा भयो यसले मेरो जीवन परिवर्तन गर्नेछ, जबकि भाइरसँगको भिडन्त भइसकेको छ । म झन् जोखिममा छु जस्तो लाग्छ ।
एक सातापश्चात् अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा मलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो । फेरि अस्पताल जानुपर्ने भयो तर भर्ना नै हुनुपर्ने गरी उपचारको आवश्यकता थिएन । मलाई फोक्सोमा समस्या देखिएको थियो अनि निमोनिया पनि । यसलाई ‘साइटोकिन स्टर्म’ भनिन्छ । यो समस्या रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा झन् बढ्ने रहेछ । धेरै मानिस तन्तु नष्ट भएपछि मर्दैनन् बरु रोग प्रतिरोधी प्रणालीले बढी प्रतिक्रिया दिँदा असर गर्ने गर्छ। ती प्रतिरोधी प्रणालीले भाइरसप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन्, यसमा अन्योल हुँदा मानिसको मृत्यु हुन्छ । म अझै पनि उपचार गराइरहेको छु । कार्टिकोस्टेरोइडको हाई डोज लिइरहेको छु, जसले इम्युन सिस्टमलाई सुस्त बनाउँछ । त्यो लक्षण पहिल्यै मसँग थियो भने कोभिड देखिँदा म बाँच्दिनथे । मेरो मुटुको धड्कन मिनेटको १७० पटक थियो । यसलाई थेरापीबाट नियन्त्रणमा ल्याइन्छ, ब्लड क्लोट तथा स्ट्रोक नहोस् भनेर ।
धेरैले सोच्छन्, कोभिडले १ प्रतिशत संक्रमितलाई मार्छ र अरुलाई भने फ्लुजस्तो लक्षण देखिन्छ । तर कथा भने अलि जटिल नै हुन्छ । धेरै मानिसमा यसले क्रोनिक किड्नी र मुटुको समस्या गराइदिन्छ । उनीहरुको न्युरल सिस्टममा अवरोध पुर्‍याइदिन्छ । विश्वभर यस्ता हजारौं संक्रमित हुनेछन् जसलाई जीवनभर मिर्गौलाको डायलसिस गराइराख्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
हामी कोरोना भाइरसबारे जति जान्न खोजिरहेका हुन्छौं त्यति नै प्रश्नहरु उब्जिरहेका हुन्छन् । हामी यात्रा गर्दै सिकिरहेका हुन्छौं । कहिलेकाहीँ म क्रोधित पनि हुन्छु, जसले कुरै नबुझी वैज्ञानिक र नीति निर्माणकर्ताहरुलाई गाली गरिरेहका हुन्छन् । महामारी रोक्न सकिरहेका छैनन् भनिरहेका हुन्छन् । यो एकदम गलत हो ।
आज सात सातापछि मलाई आफ्नै स्वरुपमा पाएजस्तो महसुस भइरहेको छ । मैले घर छेउको टर्किस ग्रिनग्रोसरबाट मगाएको सेतो कुरिलो खाएँ । म बेल्जियमको किरबेर्गेन भन्ने ठाउँको हुँ, जहाँ कुरिलो खेती गरिन्छ ।
मेरो फोक्सोको एक्सरे अन्ततः राम्रो देखिएको छ । यही खुसीयालीमा धेरै समयपछि बोतलको वाइन खोलेँ र सेलिब्रेट गरेँ । मलाई फेरि काममा फर्किन मन छ, भलै मेरो कामको चाप केही समय कम हुन्छ । मैले भोन डेर लेयनको कोभिड-१९ का लागि आर एन्ड डी (अनुसन्धान र विकास) मा विशेष सल्लाहकारको रुपमा काम थालेँ । यो आयोग खोपको विकासको सहायतामा लागि परिराखेको छ ।
जबसम्म कोरोना भाइरसको खोपको विकास हुँदैन तबसम्म हामी सामान्य रुपमा फेरि बाँच्न सक्दैनौं । यो महामारी अन्त्यको रणनीति भनेको विश्वभर खोपको उपलब्धता हो । यो भनेको बिलियन डोजहरु उत्पादन गर्नु हो, जुन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । अहिले पनि खोप बन्न सम्भव छ कि छैन भनेर यकिन गर्ने अवस्था छैन ।
आज पनि एउटा विरोधाभास देखिन्छ, केही मानिस खोप नलगाई बाँचिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले आफ्ना बालबच्चालाई पनि खोप लगाउँदैनन् । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सबैतिर पुर्‍याउनुछ भने समस्या आउन सक्छ । किनकि धेरै मानिसले खोप लगाउन इन्कार गर्न सक्छन् । यस्तो भयो भने त महामारी कहिल्यै पनि नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्न ।
डब्लूएचओले कोभिडविरुद्ध लड्न सराहनीय काम गरिरहेको छ । यसलाई अझ कम कर्मचारीतन्त्रमुखी र सल्लाहकार समितिमा कम निर्भर बनाउँदै सुधार गर्न सकिन्छ । डब्लूएचओलाई प्रायः राजनीतिक खेलमैदान बनाइएको छ ।
म जन्मजातै आशावादी व्यक्ति हुँ । अहिले म मृत्युको सामना गरिरहेको छु तर वाहियात र बकवास कुराप्रति मेरो सहनशीलताको स्तर पहिलेभन्दा तल पुगेको छ । त्यसैले अहिले म बिरामी हुनुपूर्वभन्दा शान्त छु । उत्साह बोकेर होसियारीपूर्वक अघि बढिरहेको छु ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ १३:०७